Taariikhda Suugaanta Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Taariikhda Suugaanta Soomaaliya
Suugaantu waa mid kamida tacbiir bixinta insaanka oo ay kamidyihiin caadifad afkaar iyo arimao badan oo isku guda jira suugaantu waxa ay ka koobantahay sida alfaada gabayaada iyo samaynta haysa qorista buugaagta qofka suugaanta ku shaqada leh waxa lagu magacaabaa suugaan yahan
Taariikhda fanka iyo suugaanta
taariikhda Ragbaa curiya Ragna way qoraan dadweynuhuna wuu ku camal falaa, inkasa too dhulka kala duwan ee ay ku nool yihiin dadka xoolaha, beeraha iyo xeebaha ay lahaayeen heeso uu gaar ah. Hadana waxa ka jiray magaalada Saylac ama Awdal oo ay caan ku ahayd heesho ay ku jiraan loqaddo fara badan oo kala duduwan. Ttaasi waxay ku tusaysa xadaarada fug ee Saylac.
Kadib marki Boortaqiisku burburiyey magaalooyinki ku teedsana ama ku yaalay xeebaha bada cas kuna daciifiyey islaamki waa waqtigi 1500. Hadaba Saylac waxay ka mid ahayd magaalooyinki uu burburiyey Boortaqiisku marka dadki waxay uu durkeen xaga bariga si cad waxa uu camirmay Berbera, Jigjiga, Odweyne, Ceerigaabo. Waxay dhashay inay abuurmaan magaalooyinka Burco iyo Borame iyo Hargeysa. Waxay lahayeen heeso isku xidhah. Sidaasi bay ku noqotay Hargeysi hooyada fanka iyo suugaanta.
Waxaan ka dhagaystay sanadki 2005 Idaacada Raadiyow Hargaysa warays lala yeeshay Alla haw naxariiste Yuusuf Xaaji Adan si weyn buu uga waramay taariikhdi tacliinta iyo suugaanta Somaliland. Waxaan ka faa’iiday maalinta inoo curiyey heesti la odhan jiray Somaliyey tooso. Taas oo dad badani sheegteen. Waxaan kalo ka ogaaday inoo sameeyey sowdki raaxeeye Alla haw naxariiste Xasan Adan Halac.
Hadaba dhawaan waxa laga sii daayey TV-ga ETN inoo heesta Somaaliyey toos tiriyey Cali Mirre. Markaa fadlan waxaan ka codsanaya kaydka Raadiyow Hargeysa inay mar labaad ku ceeliyaan waraysiggi Yuusuf Xaaji Adan. Waxaana loo baahan yahay inla qoro murtida iyo suugaanta. Bal maanta aan wax yar ka sheego inta aan ka aqaano: Magaca abwaanka heesta uu curiyey ….
– Yuusuf Xaaji Adan = Somaliyey toos. Wali waa carooro.
– Ismaciil cagaf = Marsin geel ka cabaaye, wuu ina kala raray.
– Saxardiid jabiye = Wixi ila garadow gobanimo ha toorina, hasheena maandeeq.
– Xasan Adan Halac = Raaxeeye, Jalaaliyo.
– Axmad Saleebaan Bidde = Sida geed caleenlo, soo noqnoqosho.
– Cali Sugule = Hawdka dooliyo faafan, waaba baryey, kowaan ka hadha.
– Xusein Aw Faarax = Dhirta xididka hoosa, amaanada Ilaahay.
– Cismaan Adan Askari = Naaf dhalad, warqadahaan.
– Cabdi Adan Qays = aduunyo, ubaxi baxayoy, soo jiidh wanaaga, akhiro.
– Maxamed Ibrahim Hadrawi = Hooyo, Cajabeey,Suleekha.
– Maxamed Cumer Huryo = Indha deeralay, bada caashaq.
– Faysal Cumer mushteeg = Subcis, rifduun, lacag, hadardari carada.
– Xusein Jaamac ( Xaaji Gujis) = Gaasira, gobaad, hawenka uu samir.
– Xasan Xaaji Cabdillahi ( Xasan-Ganay ) = Sayla, diimis, waayaha, geediga.
– Maxamed Adan – Dacar = Shacni iyo wanaag, kalay raaski ii raac.
– Cabdi Iidaan = Casaan midabka dhiinka ah, xurmo daran, Diiggaa, Jacayl Biri ma goyo, Hadaan baaadad leeyahay
– Maxamud Cabdillahi – Sangob = Sabaalo, Llix kun iyo lix boqol.
– Cali Suleeman Bide = Balan baalis, Galbis, saylaha libaaxo.
– Dheeg = Dad nimada aqoonso, caawo waxa leh.
– Xasan = Saxar qaada fooraha, gododle, darmaantaan jeclaayey, shacbant.
– Cabdi Cali Wayd = wehelkay, wadnahayga dhiiga, haygo dilin.
– Xasan Sh Muumin = Shimbirayo heesa, waa qaali malabku.babayggi jamamiyo.
– Ibrahim Gadhle = Dadka hayska weyneyn, maxa dayr cadgeeloo.
– Cabdiraxmaan Xasan = Rafiiq, dhexdeena, guudlow libaaxiyo.
– Sulub = Daaroraha hilaaciyo, qaysiyo cilmo dilay.
– Yusuf Shukri = Somaliland dadkayga Somaliland dalkayga.
– Axmed Aw Geedi = Sumalow darbane, labaddi, Alla waa xojoy.
– Kayd = gobay liico ha jabin.
– Xayd = (qadar) geel dhalay ku maale.
– Cabdillahi yare = Laan dheer.
– Baashe = Horta ayey isku keen diray.
– Maxamed Suleman = Malyuun hibo la siista.
– abwaan axmed abshir dhoore daljir
Hadaba Maanta inta yar iga hooya cidi aqoon fiican uu leh kaydka suugaanta waxaan jecelahay inayno ka faa’iidno nabad gelyo.
Hunguri calaf baa xukuma
Hantina dhaqan baa shushuba
Hu’giisa inaan ka qaado
Hadhiinadu baadi weeye
Horraadka intaad jaqaysey
Hilowga naftaa aloosan
Kashaa hinqanaysa goorba
Ciddaad ku hallaysay mooyi!
Maanso: Shacabkaa Dambiila ah
Waa maxay Suugaani ? (W/Q: Cabdixakiin Cabdilaahi Aaden dheere)